Ibhedi yeCulinary&Art 404
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCulinary
Igumbi elinesitayile eligxile kubugcisa, eli gumbi le-1R lifanelekile kubusuku bamantombazana okanye indibano kunye nabahlobo! Kukuhambo lwemizuzu emi-6 kuphela ukusuka kwisikhululo sase-Hamamatsu, ke kulula kakhulu! Zininzi iicafe ezinesitayile kunye neendawo zokuthenga ezijikeleze. Nceda uchithe ixesha lokuphumla.
Imisebenzi yegumbi inokutshintsha.
Amagumbi abekwe kumgangatho we-4 kwaye anokufikelela kwi-elevator.
Amagumbi ngokwawo ahonjiswe ngobugcisa kwaye afanelekile kwiintsapho kunye namaqela ukuba abe nexesha elimnandi.
Ibhedi kunye noyilo lwangaphakathi
Iibhedi ezi-3 zomntu omnye.
Ibhedi yesofa x1
Izixhobo / ifanitshala
Into yokufaka umoya endlini.
Iinkonkxa zenkunkuma zokuhlelwa
IsiHumidifier (Ekwindla/Ebusika kuphela)
Iimela zeKhitshi kunye neebhodi zokusika
Ulwelo lokuhlamba izitya kunye nesipontshi
I-shampoo, i-conditioner kunye nesepha yomzimba
Indlu yangasese enewaslet.
Isithuba ekwabelwana ngaso
Isicoci se vacuum.
Uhambo lwemizuzu emi-6 ukusuka kwisikhululo saseHamamatsu!
Kukho ivenkile eluncedo kumgama wokuhamba ngomzuzu omnye.
Kukho udederhu lweevenkile kumgama wokuhamba!
Kukho iHammatsu Castle ehamba ngeenyawo kwimizuzu ye-17, kwaye indawo ejikelezileyo ilula kakhulu.
Amagumbi akwisiXeko saseHamamatsu, esikwintshona yeSithili saseShizuoka. Ikwabizwa ngokuba yiOmi okanye i-Enshu. Yayisaziwa njengePhondo laseTotomi, kwaye yayikwabizwa ngokuba yiHamamatsu Prefecture de yadityaniswa kwiSithili saseShizuoka. Isixeko saseHamamatsu kunye ne-Enshu sinembali ende, ngakumbi iHammatsu Castle, eyadlala indima ebalulekileyo ukusuka kwixesha le-Waring States ukuya kwixesha le-Edo. Ngexesha le-Edo, inkosi yeNqaba yaseHamamatsu yayihlala inyuselwa kwizikhundla eziphezulu kwi-shogunate, yiyo loo nto yaziwa ngokuba yi "Castle of Success".
I-Hamamatsu ikwabizwa ngokuba sisixeko somculo, kwaye yindawo yokuzalwa yabaninzi abavelisi bezixhobo zomculo zaseJapan ezifana ne-YAMAHA kunye ne-KAWAI, kunye ne-Roland kunye ne-BOSS. Ngenxa yoko, i-Hahamatsu yindawo efanelekileyo yokuhlala ukuba unomdla kumculo kunye nezixhobo zomculo. Ngokomzekelo, enye yeemyuziyam eziphambili zaseJapan kwizixhobo zomculo ikufuphi nesikhululo saseHamamatsu. Kukho malunga ne-1,300 yezixhobo eziboniswayo ezivela kwihlabathi liphela, hayi ezisuka eYurophu kuphela, kodwa zisuka eIndiya, eOceania, nakwezinye iindawo zehlabathi ongazange uzibone ngaphambili. Ungachukumisa kwaye udlale izixhobo, umamele isichazi-magama, umamele umculo waseJapan, kwaye uqambe umculo ekhompyuter.
Le nqaba imile ngendlela engaqhelekanga phambi kweSikhululo saseHamamatsu yindawo edumileyo enevenkile ezininzi kunye neeresityu.
Inqaba yaseHamamatsu -
Inqaba yakhiwa ekuqaleni kwenkulungwane ye-14 kwaye yadlala indima ebalulekileyo kwimbali yaseJapan, ngakumbi ngexesha lokulwa kunye namaxesha e-Edo. Namhlanje, ibekwe eHamamatsu Castle Park.
Izoo ye-Hamamatsu - (indawo yokumisa ibhasi "zoo")
Lo kuphela kwezilwanyana zaseJapan ezinenkawu egama linguGolden Lion Tamarin. Le yindawo edumileyo kubahlali kunye nabakhenkethi ngokufanayo.
Imyuziyam yeBhokisi yoMculo yaseHamanako- (indawo yokumisa ibhasi "Hamanako Pal Pal Pal", Kanzanji Ropeway)
Ibekwe kufutshane neLake Hamana kwaye ibonisa iikhariloni zaseYurophu, igramafoni kaEdison kunye nepiyano ezenzekelayo. Unokufumana amava okwenza ibhokisi yomculo uwedwa kwaye uthenge uluhlu olubanzi lweebhokisi zomculo njengezikhumbuzo. Iyafikeleleka ngebhasi kunye neropeway.
Imyuziyam yeHamamatsu yezixhobo zoMculo -
Ifumaneka kufuphi ne-Act Tower, le myuziyam inezixhobo zomculo eziphuma kwihlabathi jikelele. Le yindawo enokufumaneka kuphela eHamamatsu, "iSixeko soMculo". Iisemina zomculo weClassical nazo zibanjelwa apha.
I-Airpark - (isikhululo sebhasi "Izumi 4-chome")
Ibekwe kwisakhiwo sobudlelwane boluntu kwiSiseko soKhuseleko lwe-Air Self-Defense Hamamatsu Base. Kukho imiboniso yenqwelomoya yokulwa kunye noqeqesho, kunye nesifanisi sokubhabha, kwaye yindawo eyonwabisayo ukuyindwendwela. Inokufikelelwa ngebhasi.
I-Ryugaam-dong - (ukusuka "e-Ryugaam-dong Entrance" kwindawo yokumisa ibhasi)
Ngumqolomba wekalika obekwe kwicala elingasentla kweLake Hamana. Ilitye likalikalika lomqolomba kuthiwa lenziwe malunga nezigidi ezingama-250 kwiminyaka eyadlulayo. Inokufikelelwa ngebhasi.
Enshu Kotogama Tatezanji Kobo - (Tatezanji Onsen bus stop)
Ungazama isandla sakho kwizinto zobumba kwigalari yombumbi ofumene imbasa yokuKhuthaza yeSebe lezeMfundo, iNkcubeko, iMidlalo, iSayensi kunye neTekhnoloji. Ifikeleleka ngebhasi.
Umbuki zindwendwe ngu- Culinary
Unxibelelwano lufumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki, iintsuku ezingama-365 ngonyaka.
Nangona kunjalo, nceda uqaphele ukuba kunokubakho ukulibaziseka ekuphenduleni kwiimeko zikaxakeka. Nceda uqonde ukuba oku akunjalo.
Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuba siphendule ngokukhawuleza!
Nangona kunjalo, nceda uqaphele ukuba kunokubakho ukulibaziseka…
Inombolo yomthetho: I-Hotels and Inns Business Act | 浜松市保健所 | 浜松市指令健生第２１号
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Naka-ku, Hamamatsu